Paartiin Semaayaawii har’a waaree booda, tuta gaazzexeessotaa waameef ibsa isaa barreeffamaan dubbiseen, mootummaan ADWUI yokaan IHADEG, seenaa uumamee odeessamuun, shiraa fi jibbinsaan qabiyyeelee biyyattii jeequudhaan, Tokkummaa biyyaa diiguudhaan, jireenya nagaa lammiwwan biyyattii raasee jira – jechuudhaan himata.
“sirna addaan-qoqoodduu” ittiin jedhe kanas, isa dhumaatiif akka xumurri itti godhamuuf, qabsoon uummataa jalqabame akka itti fufu qooda gama isaa ka gumaachaa jiru tahuu dubbata. Itti fufuudhaanis, “tajaajiltoota sirnichaa” qaamota jedhu irraa qajeelfame kennameen, kutaalee biyyattii adda addaa keessatti gochaaleen farra-namoomaa ta’an raaw’atamanii jiran – jedha – Paartiin Semaayaawii ibsa baaseen. Itti-aanaa itti-gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa – Obbo Tewoodiroos Habte-maariyaam barreeffamicha dubbisan keessatti, “Kana kan agarsiisu, ammaan dura godinaa Beench-maajii, Baddannoo, Hin quuftuu, Watar, Arsii, Jimmaa, Bunnoo, Geedoo, Somaalee-Itiyoophiyaa, Gujii fi naanoolee biyyattii ka biroo keessatti lammiwwan keenya irratti gochaan farra-namoomaa suukanneessaan raaw’atamee jira.
Naannoolee jiaataan irraa akka buqqa’an taasisuu dabalee miidhaan irratti raaw’atamee jira. Qabeenyaa fi mi’i isaanii manca’ee jira. Kanneen yeroo dhihoo keessatti argine, raaw’achiisummaa fi deggersa humnoota hidhataniin, akkasumas, maxxanoota sirnichaa ka biroodhaan kanneen miliyoona tokko tahanii naannoolee Somaalee Itiyoophiyaa, Moyyalee fi naannoolee ka biroo keessa jiraataa turan – dhalattoota Oromoo fi Somaalee irratti miidhaaleen raaw’ataman, gochaalee dhiheenya kanaa ti” jedhan.
Ajaja aangawoota mootummichaatiin, naannoolee ka biroo, akkaa naannoo Benishaangul Gumuz faatti dhalatoota Amaaraa irrattis miidhaaleen akka akanaa raaw’atamuu isaa dubbata – paartichi.
Miidhaan lammiwwan biyyattii irratti yoo hin dhaabamu tahe, aangawoonni mootummaa gochaa kana raaw’atanii fi raaw’achiisan ka seeratti hin dhihaanne yoo tahe, paartichi akka hiriira mormii waamus akekkachiisee jira.